မိုးမြင့်ယံ - နာကျင်ကျွမ်းမြ နေ့ရက်များ - MoeMaKa Media
Home / Coup / Essay / Literature / Moe Myint Yan / မိုးမြင့်ယံ - နာကျင်ကျွမ်းမြ နေ့ရက်များ
မိုးမြင့်ယံ - နာကျင်ကျွမ်းမြ နေ့ရက်များ
Coup, Essay, Literature, Moe Myint Yan
(မိုးမခ)ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၂၁
တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်း၌ငိုကြွေးနာကျင်တောက်ခေါက်သံတို့သည်လွင့်ပျံ့လျက် စိတ်ရဲ့နားမှာ အစဉ်သဖြင့် ကြားနေသော အသံများပင် ဖြစ်နေသည် ။
ရန်ကုန်မိုးသည်ပင် အညှိုးကြီးလွန်းစွာသွန်းဖြိုးရွာနေသည်လား သို့တည်းမဟုတ် အပူတို့အားထပ်တူမျှယူ၍ ငိုကြွေးနေခြင်းပင်လား မသိနိုင်ပြန် ။
ပြတင်းတံခါးတို့ဖွင့်ထားပါလျက်နဲ့ မွန်းကြပ်မှုတို့အချိန်ပြည့်ခံစားနေရသောအဖြစ်တို့သည် ဝဋ်နာကံနာ ကြီးလွန်းလှပေသည် ။
ထို့ပြင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်ရာ အဝန်းအဝိုင်းလေးတခုအတွင်းမှာမှ ကြွေလွင့်ကြယ်များအကြောင်း နေ့စဉ် ဆိုသလို မြင်တွေ့ ကြားသိရဖန်များလာသောအခါ ရင်သည် တဆစ်ဆစ်နဲ့ပွန်းပဲ့နာကျင်မိရပြန်သည် ။
အစားထိုးမရနိုင်သောဆုံးရှုံးမှုတို့သည် ရံခါမလပ်ထိုးနှက်နှိပ်စက်နေတော့မည်အသွင်ဖြင့် လောင်ကျွမ်းနေရမည့် အလွမ်းငွေ့ငွေ့ ဖွဲမီးတွေလိုပင် ဖြစ်နေပြန်ပါသေးသည်။
ငွေ့ရည်ဖွဲ့အလွမ်းတို့ရဲ့ နာကျင်သိပ်သည်းဆသည် မည်၍မည်မျှကြီးမားသည်ကိုတော့ တိတ်တိတ်ကြိတ်ရှိုက်ခဲ့ရသော ညတွေသာ သိမည်ထင်မိပါရဲ့လေ ။
ဒဏ်ရာခရီးသွားနှစ်တို့သည် အဘယ်ကာလမှ ကုန်ဆုံးနိုင်လေမည်မသိနိုင်ပြန်ပါ။
တယောက်ကိုတယောက် ဖေးကူရပ်လို့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ ဒီလိုနာကျင် အချိန်မြစ်ကြီးထဲ၌ မနီးအပါးမှာ ရှိနေပါလျက် ဆုံတွေ့ခွင့် မရကြသော မိတ်ဆွေများနှင့် အဝေးရောက်ချစ်ခင်ရသူများ အားလုံးကျန်းမာစေကြောင်းသာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စိတ်ကရည်လျက်သာ တတ်နိုင်သည်ပဲ ။
နေ့နဲ့ ညတို့၏လှည်ပတ်မှုတို့သည်လည်း တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်တစ်စပြင်အသွင်ကို အစဉ်ဆောင်ကြည်းနေသကဲ့သိုပင် ။
ငိုကြွေးခြင်းထက် ပိုမိုနာကျင်ခံခက်လှစွာသော ချစ်ခင်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုမှလိုက်ပါ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ခွင့်မရှိလောက်အောင် ကျဉ်းမြောင်းလွန်းလှသော အသက်ရှင်နေထိုင်ရမှုသည် ဆိုးရွားလွန်းလှပေစွ။
ဝါးကူထိုးခံနေရကြရှာသောရေနစ်သူလိုဘဝတွေမှာ အားကိုးရာကောက်ရိုးတစ်မျှင်တောင် ပျောက်ရှခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေအတွက် ဘယ်လို ဖန်ဆင်းရှင်ကို အပစ်ဆိုခွင့် ရှိနိုင်ပါ့မည်နည်း။
ထိုမေးခွန်းတို့သည်ပင် အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် အဖြေမရှိသောပုစ္ဆာတို့ပင်ဖြစ်နေပြန်သည်။
အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ တိုးဖွဖွရွတ်မိသော အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ တရားတို့သည်ပင် ယခုပစ္စက္ခကာလ၏ ပြယုဂ်တစ်ခုပေများလား ။
သေခြင်းမှာတောင် ငြိမ်းချမ်းခြင်းကင်းပရတဲ့အဖြစ်တွေအတွက် ဘယ်လို လောကပါလတရားကို အပစ်ဖို့ရမည် မသိနိုင်ပြန် ။
အဆုံးသတ်ခွင့် ရရှိနိုင်မည့်နေ့ရက်တို့ရောက်ရှိဖို့ရန် အသက်သစ်ရွက်တွေ ဘယ်လောက်တောင် ကြွေပေးရဦးမည်နည်း ။
ပြတင်းပေါက်မှလှမ်းမျှော်ကြည့်မိသော ပြင်ပလောကဓာတ်တစ်ခွင်သည်ပင် အလင်းရောင်အောက်၌ အုပ်ဆိုင်းမှုန်မှိုင်းနေဘိသကဲ့သို့ စိတ်မှာ ထင်နေမိပြန်သည် ။
တိမ်စိုင်တွေရဲ့လွင့်မျောမှု၌လေးလံလာရင် ရွာသွန်းလိုက်သမျိုး စိတ်ရဲ့လေးလံဖိစီးမှု၌ မျက်ရည်တို့သည် ရံခါမလပ်ပြိုကျနေတတ်ပြန်ပြီ ။
ထိုအခါမျိုး၌ ချစ်ခင်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးကျန်းမာပါစေကြောင်း ဆုခြွေတောင်းရင်းနဲ့သာ အသက်ဓာတ်လေးကို အားတင်းမွေးမြူရပေဦးတော့မည် ။
17 . July . 2021
မိုးမြင့်ယံ - နာကျင်ကျွမ်းမြ နေ့ရက်များ Reviewed by k on 11:05 AM Rating: 5
Moe Myint Yan